Xukumadda Soomaaliya oo qorsheyneysa in amniga Muqdisho ay sugaan ciidamo isugu jiro Booliis, Asluub iyo Milateri – XAMAR POST
Mudooyinkii dambe waxaa magaalada Muqdisho lagu qabanayay kulamo looga hadlayay amniga magaalada Muqdisgho kaasi oo ladoonayo in wax badan looga qabto magaaalda Muqdisho xasilooniyadeeeda iyo naabd kusoo dabaalideeda intaba.
xukuuamdda Soomaliya ayaa qorsheyneysa in amniga magaalada Muqdisho iyo xasilooniyadeeda loogu yimaado ciidamo isku dhaf ah ee kakala tirsan Booliiska, Asluubta iyo Milatariga Soomaaliya.
Ra`iisul wasaaraha ku xigeenka daka mahdi Maxamed Guuleed ayaa xalay booqday xarumo ay joogeyn ciidamadaasi la doonayo in ay sugaan amaanka magaalada Muqdisho.
Taliyaha ciidanka Asluubta sareeya guud Bashiir Maxamed Jaamac Goobe ayaa hadal kooban ka jeediyay munaasabad lagu soo bandhigayay ciidamada ka kala tirsan Asluubta Booliska iyo waliba Milatirga kuwaasi oo sheegay waliba inay yihiin dhalin cusub ee kusoo biirtay ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaliya, loona diyaariyay sugida amniga Muqdisho.
RW Kheyre oo Shir kusoo xiray Istanbuul+Sawirro